Isimo esilula: wena uphumelele. Ayikwazi ukufumana uvuyo, xelela ukuba iphupha lakho liya kuzaliseka kungekudala. Kwaye ngokuzumayo ... yonke into iyaxakatheka. Yintoni le - iliso elibi, urhwaphilizo? Okanye ukuphulwa kwemithetho ethile yengqondo? Uyazi njani ukuba kukho umonakalo okanye ububi kumntu?
Ngaba umntu omnye unokusebenza kwenye into ukuze abe neengxaki zezempilo okanye izicwangciso? Ewe, sonke sisebenzisana nomnye ongeyomlomo kwaye sivakalelwa ngolu hlobo. Ngabantu abathile bathanda ukuthetha nabo, ndifuna kwakhona ukuva. Yaye kunye nomntu ongenqwenelekayo nokuba athethe igama, nangona le ndoda ayenzanga nto ephosakeleyo. Ngomntu othethileyo, kwaye kwaba lula kuwe, kunye nomntu, nje ngokuba kwinkampani efanayo, waziva ubunzima emphefumlweni, ukuxhalaba, ukuxhalabisa. Xa sithetha ngeempumelelo zethu, malunga nokulindela into entle, sivulekile. Kwaye ukuba ngaba ngumntu ochasayo ngelona xesha uya kugcwaba umona, into ebizwa ngokuba yi "iso elibi" ingenzeka.
Mhlawumbi oku kungachaza iingxaki ezingalindelekanga. Ngokomzekelo, umlingisi weshumi obonakala ngokucacileyo waya kwindondo, ngokukhawuleza uwagula, kangangokuthi akaphelelanga isikolo ... Enyanisweni, ukugqithisa kweso isobi kukhulu kakhulu. Ngokuphindaphindiweyo, akuphelelanga iingxaki zengqondo ngexesha. Umfana othi "uya kwindondo" uhlala kwimeko yokuxhalabisa: abazali, ootitshala, abazali bakhe, ootitshala, yena usekuphambili kweso sikolo sonke, wonke umsebenzi wokulawula nguye uxinzelelo olukhulu. Uloyika ukuvumela abo bakholwayo kuye. Yongeza kule nto inomdla wabazali bezinye abafundi, umnqweno wootitshala ukuba "banqunyulwe" umfundi ohloniphekileyo, intlondi yabathengiselwano, ukudelela "i-botanist" kubalingana nabo ekilasini ... Ukuba umntu unesistim esinobuthathaka, akukho jongano elibi lifunekayo - akayi kumela uxinzelelo, kwaye i-psyche iya kudala uhlobo oluthile lwesifo somatic kuye.
Abantu bahlala bekhononda kwizengqondo zeengqondo ngezikhalazo eziye "zixhunyiwe." Njengomthetho, ngaba abo abangafuni ukuthatha uxanduva lokuphila kwabo. Kulula ukuchazela zonke iingxaki ezenzeka ebomini babo, impembelelo yamandla athile angaqondakaliyo. Baphendukela kumagqirha, izazi zengqondo, ukwenzela ukuba kwiseseshoni enye "bayisuse i-spoilage" okanye basombulule iingxaki zabo. Kwaye kuyinqweneleka kungekhona ukuxineka ngexesha elifanayo. Kodwa oku akukwenzekayo. Ingxaki ayiphumekanga namhlanje, sele iqalile. Ngoko, ukuze ukwazi ukujamelana nayo, udinga ixesha kunye nomnqweno omkhulu womntu. Unamandla kangangokuba yonke iminye imisebenzi ifakwa kwi-burner yangemuva. Ngexesha elifanayo akukhathazeki ukuba kukho umonakalo okanye ububi kumntu. Ngamanye amaxesha kukho iziganeko ezimnandi nje xa umntu ekhutshwa, umzekelo, ukwesaba okungapheliyo kwaye ekugqibeleni. Kodwa yonke ixesha ixabisa umzamo omkhulu kumagulane kunye nengcali yeengqondo.
Ngabo banengxaki yengqondo, yonke into, ngokubanzi, icacile. Ewe, ukuba umntu oqalise ingxaki ubona imiphumo ebonakalayo yempembelelo yeso isobi, njengemingano ekhonjiweyo emnyango wangaphambili, umhlaba oqhekekileyo emnyango. Ngoku kuye kwavela uninzi lweencwadi zobuqhetseba, apho kuthethwa khona iinkcubeko ezahlukeneyo. Kwaye kukho abantu abacinga ukuba konke kulula: kufuneka wenze oku kwaye, kwaye umntu ongakuthandi uya kugula. Kodwa, okokuqala, abakucingi ukuba yiyiphi inengozi abaye bayibonakala kuyo. Ububi bubangele enye ibuyisela njenge-boomerang. Oku, kwakhona, incazelo ebonakalayo yenyama. Umntu owonakalisa omnye, engazi kakuhle into enetyala. Kwaye oko kuthetha ukuba uya kwenza iimpazamo ngokuziphatha. Kwaye ngenxa yoko, iingxaki aziyi kuthatha ixesha elide. Okwesibini, le miko inezinto ezininzi, kwaye akubona wonke umntu onokuyibamba ngokuchanekileyo. Kodwa ngokuqhelekileyo umntu owenziwe kuso uyangena enkingeni ... Enyanisweni, ngokuqhelekileyo nabo banesimo sengqondo. Le ndoda ifumene umkhondo wesithethe somloki. Ngengqondo, sele eselinde: into emele iyenzeka-kuba inkohlakalo okanye inkunzi. Ngokuqinisekileyo ubiza iingxaki ebomini bakhe, kuba into engathandabuzekiyo yinto engaqinisekanga. Ewe, kwinyani yethu ixesha elide akumele kuthiwa ...
Indlela yokwenza ngayo le meko ngokuchanekileyo? Qhathanisa oku kunye nesinye isiko. Ukuba ukholwa ngamatsalane-adilesi, ungabhekisela kuwo. Ukuba akunjalo, uye kwiingcali - iingqondo zengqondo, i-hypnologists. Kwaye kunye nabo, qondani isizathu sokuba umntu afune ububi. Yintoni eyakucasula kwabanye abantu kangangokuthi bakulungele ukwenza ubugqwirha, nje ukukucasula? Emva kokuqonda oku, hlengisa indlela oziphatha ngayo.
Kodwa konke oku akuthethi ukuba ufanele uhlale "yimpumputhe", ungabelani ngempumelelo yakho, ungabonakali ukuhlala kwakho kunye nombuzo othi: "Ubomi njani?" - ukuphendula: "Kubi kakhulu kunokuba akukho ndawo!", Ukuze ungabangeli umona. Kule meko, kufuneka unamathele kwixabiso legolide. Ewe, musa ukuziqhayisa, ungavuli iimvakalelo ezimbi kubantu. Kodwa ungakhathazeki. Okokuqala, abanye bazive benganyaniseki xa uthi: "Okubi kunabo bonke!", Enyanisweni, ababala. Kwaye baqala ukuhlazeka kuwe. Okwesibini, ukuba uphinda ukuphindaphinda ngoku, ubomi buya kuncipha ngakumbi: ilizwi linempembelelo enkulu kwizinto eziyinyani. Ukuzikhusela kwisilingo esibi, zama ukuziphatha ngendlela engabangela ukungafuni ukungafuni kwabanye. Zama ukuzithiba, ukuqonda, ukuhlonipha. Emva koko nayiphi na impumelelo yakho iya kubonakala ilungile kwaye ayiyi kubangela ukuphendula okungamona.
Indlela yokufunda ukubona ikusasa?
I-Horoscope ngo-2010: ama-Aries, Tiger
Inyanga kaDisemba izikali, i-horoscope
Isibikezelo seenkwenkwezi ngeenkani, uJanuwari
Ukupheka okusebenzayo kunye neengcebiso malunga nokutsala inhlanhla kuwe
Iintsholongwane ze-Antisperm kubasetyhini
Ukutyunjwa: izizathu zokubonakala, unyango
Masks ngobuso, iingcebiso
Iidyulo zanamhlanje - ukuhamba ngesiteji ngokupheka
Indlela yokukhululeka embhedeni?
I-Lethargy, ukukhathala komzimba
Ukuphuma kwintsholongwane ngexesha lokukhulelwa
Opyat kunye namazambane kwi-ukhilimu omuncu
I-Koldun ne-Svetikova ziya kucula kwi-opera yamatye "Inkwenkwezi nokufa kukaJoaquin Murieta"
I-pie nama-raspberries kunye ne-cream vanilla
I-Carbonara unamathele ngqolowa kunye nesilili